Indlela yokuba yintandokazi yamadoda, iseluleko. Indlela yokuba owesifazane othandekayo futhi oyifunayo, umkami
Sitshela izimfihlo, ukuthi singaba kanjani intandokazi futhi sifuna kakhulu
Owesifazane ongenalo uthando, njenge-rose ngaphandle kwelanga: ngokushesha noma kamuva abune, angabonakali ngokugcwele. Uthando olunikeza thina, abesifazane, amandla angenamkhawulo, avuselela, avuselele futhi ayenze amahle. Yiqiniso, futhi uguqula abantu futhi wenza ngcono. Kodwa kungenxa yengxenye enhle yesintu esithandayo ingenye yezidingo eziyisisekelo ezithokozisa injabulo yomuntu siqu. Kulesi sihloko, sizozama ukuthola ukuthi singabathandeka kanjani, singenakuqhathaniswa futhi sifuna kakhulu ingxenye yesibili.
Ngiyakuthanda, ngakho-ke, ngiphila!
Lo mgca ovela enkondlweni kaDev. Vysotsky odumile ubonisa ngokubaluleka kokuba khona kokuthandana komunye nomunye ekuphileni kwabesifazane bonke. Kuyinto emfushane kakhulu, kodwa inamandla okwanele ukuveza isizathu esiyinhloko esenza sonke silwela uthando.
Iqiniso liwukuthi ngenxa yezici ezithile zengqondo umuntu kuphela ozizwa ngokugcwele njengomuntu obalulekile futhi ovumelanayo, lapho empilweni yakhe kukhona omunye umuntu othanda ngobuqotho futhi omamukelayo. Njengengane, le ndima yenziwa ngumama, nasembusweni omdala - othandekayo. Yiqiniso, ungakwazi ukuphikisa ukuthi lo muntu ngokwakhe ungumuntu olungiselelwe, futhi akadingi noma yiziphi izengezo, kodwa lokhu akulona iqiniso ngokuphelele. Sonke sidinga ukulondeka, ukudumisa, ukuncoma, ukunakekelwa nokunakwa, okungagcinwa ngokugcwele komunye umuntu. Futhi lokhu ukubonakaliswa okuyinhloko kothando - ubumbano obuningi nokwamukelwa okugcwele.
Ngifuna ukuthandwa futhi kuyadingeka!
Uma kwakukhona imithetho yamaphuzu empilweni yethu, bekuyoba ngokwanele ukuthola i-wand magic noma ukucela iNhlanzi Yegolide futhi voila - "uthando kuya ethuneni" kuqinisekiswa kuwe! Kodwa-ke, iqiniso lethu likude nezwe lezintatheli futhi kulokhu kudingekile ukufeza konke ngokuzimela. Kufaka nothando lomunye. Kuyizinganekwane kuphela nezinkondlo zezinsikazi lapho ebona khona, izinyembezi zabo zihlangene futhi uthando oluvuthayo luvutha phakathi kwabo. Amadoda anamuhla, uma ebuka amehlo e-smartphone noma ithebhulethi, cishe kungenzeka "ahlangabezane ne-eye" nge-neckline yakho, futhi angaboni "izwe lakho elijulile elingaphakathi." Yebo, ungaqhubeka ukholelwa ukuthi kwenye indawo kukhona i-romantics yangempela nezikhulu. Kodwa ulinde kuze kube yilapho lezi zinhlobo ezisengozini ezivela eBhukwini Elibomvu zikuthola futhi zijabule uthando lwakho, luyiziphukuphuku! Okokuqala, umncintiswano "wabesifazane abahlakaniphile nabahle" uphakeme kakhulu. Okwesibili, kungathatha isikhathi esiningi ukuthi inkulumo ethi "ethuneni" izoba ingokoqobo kakhulu. Ngakho-ke, uma ufuna ukuthandwa futhi ujabule manje, futhi hhayi kanye lapho, khona-ke thatha isiphetho ngezandla zakho!
Ungaba kanjani owesifazane othandekayo futhi oyifunayo?
Ngakho safika embuzweni obaluleke kakhulu, sihlupha abesifazane emhlabeni jikelele, ukuthi bangaba kanjani abathandekayo nabathandekayo. Yenza ngokushesha ukubhuka ukuthi ngeke uthande ngokuqinile, futhi awukwazi ukwakha injabulo yakho ekuhluphekeni komunye. Lezi zinsuku zabantu zigcwele ukuhlakanipha kwezwe futhi zisekelwe ekuhlangenwe nakho okubuhlungu kokhokho bethu. Ngakho-ke, uma ufuna ukuthandwa ngempela, ufisa futhi ujabule, khona-ke shiya yonke imizamo yokupenda bese umdonsa indoda ngaphandle komndeni. Uma umuntu engekho mahhala noma enganandaba nawe, akuyona indoda yakho. Angeke akujabulise, kungakhathaliseki ukuthi ufuna kangakanani.
Kuyinto enye indaba uma nonke nakhululekile futhi nithandana komunye nomunye, kodwa ihlala ngokumemezela kothando. Esimweni esinjalo, kungenzeka, futhi ngezinye izikhathi kuyadingeka, ukuthatha isinyathelo kuqala ebuhlotsheni. Yenza nje ngomusa nangomusa. Ngenxa yokuthi amadoda amaningi, njengamahhashi asendle, kuphela ezwa "umkhonto" wobuhlobo obunzima, ngokushesha ugijima, ekhanda. Ngakho-ke, ukwehlisa i-"Mustang" yakho udinga ukuthobeka ngobumnene, kancane kancane.
Okokuqala, yenza imihlangano yakho ibe yisikhathi esihle kakhulu sosuku. Akuyona kunzima njengoba kungase kubonakale ekuqaleni:
zungeze othandekayo wakho ngokunakekelwa nokukhathalela, ube nesithakazelo ezindabeni zakhe nasezinkingeni, wenze izinto ezimangalisayo nezipho ezimnandi.
ungalokothi wenqabe ukwabelana ngokuphumula, noma ngabe unikeza umkhankaso webhola noma ukuxhuma nabangani bakhe. Ukuvumelanisa, ubonisa lo muntu ukuthi uyathandeka kuwe, futhi ukuzijabulisa kwakhe kubalulekile kuwe. Kuphela, sicela, wenze ngobuqotho futhi ungadlali ngokwanele!
hlonipha umndeni wakho nabangani, ngisho noma bengakuhle kakhulu. Mhlawumbe, ngenkathi nje ungabazi kahle. Banike ithuba.
Kodwa okubaluleke kakhulu - ungenzi umuntu wesakhiwo sakhe. Ungazami ukulawula konke okuhambayo ngemibuzo engapheli kanye nezingcingo. Uma wenza konke okulungile, uzokutshela ukuthi wayekuphi nokuthi wenzani emini. Ungabi nomhawu kusuka ekuqaleni futhi ungaqhubeki - kuyisimanga esivusa amadlingozi. Uma ukhathazekile ngunobhala wakhe omusha, zama ukukhuluma naye ngokuthula ngakho, ngaphandle kokuqeda ama-hysterics. Funda ukuthembela othandekayo wakho nanjengowesifazane omangalisayo onjengawe, akasoze eya kwenye!
Ungaba kanjani umfazi othandekayo?
Maye, kwenzeke ukuze uma wazi isimangaliso esikhulu sokuthandana, ekugcineni abantu balahlekelwa yilokho. Ukuphila, izinkinga, ukungabi nemali, umsebenzi ohlala njalo, izingane ... Konke lokhu kuyonakalisa uthando ngobudlelwane. Futhi nayo iyanyamalala futhi isifiso sokusondelana, ukujabulisa omunye nomunye futhi unake, unakekele. Ngenhlanhla, uma uthando lwabantu abashadile lungokoqobo, kulula ukuluvuselela.
Futhi udinga ukuqala ngezinkumbulo zothando. Inkumbulo yethu ihlukile! Futhi ngisho noma kubonakala kuwe ukuthi imizwa edlule ikhohliwe isikhathi eside, zama ukuvuselela ngezithombe, amakha, umculo. Isibonelo, ukhumbule ukuthi uqale wahlangana kanjani nomyeni wakho nokuthi yikuphi ngempela ekuziphatheni kwakhe, ukubukeka, imikhuba yakubophezele ekujuleni komphefumulo wakhe? Futhi yiziphi izincomo azenzile kuwe ngosuku? Iyiphi ingoma othanda ukuyidansa? Uma ubamba imemori, ungathola eziningi zalezi zingxube ezingabuyisa ukuhlanza ezinyangeni. Ngisho nephunga lamafutha, owawasebenzisa ngesikhathi sokuvakashelwa kwakho, angakhumbuza othandekayo wesithandwa esidlule.
Hlela ubusuku bokumangala obuthandanayo endaweni yokudlela oyikhonzile, ukuzinikela ezinkumbulo ezixhunyaniswe nale ndawo, futhi ukhohlwe zonke izinkinga okwesikhashana. Khumbuza indoda yobuhle ayeholele ngaphansi komqhele eminyakeni eminingi edlule. Futhi noma ngabe ukubukeka kwakho kushintshile kakhulu, ingubo enhle kanye nokwenza kahle kuzokusiza ukuba umthande othandekayo wakho.
Khumbula ukuthi kuyadingeka ukubuyisela ukuqala kwemizwa emizwa isinyathelo ngesinyathelo, kancane kancane. Futhi ukuqokwa okulodwa akuyona i-panacea. Zama ukukhokha kakhulu umyeni wakho, ukuphikisana okuncane futhi uphakamise, khuluma okuningi futhi uxoxe ngezinkinga ezivamile nsuku zonke. Ukuqaphela imizamo yakho, indoda ethandekayo ngokuqinisekile iyokusekela futhi maduzane uzothola okwesibili injabulo ndawonye!
Zithande futhi uthandeke futhi uthandeke
Futhi esiphethweni sinezela umcabango obalulekile: uma ungazithandi futhi uzihloniphe, ungalindeli ukuthi omunye uzokuthanda. Ngakho-ke, uma empilweni yakho kungekho mzwelo ohlanzekile futhi oqotho, bese uqala ngothando ngokwakho. Nje ungadideli uthando lwangempela nge-egocentrism, ubugovu nokuhlambalaza. Ukuzithandela ukwamukelwa nokwamukelwa, ukuvumelana kwangaphakathi kanye nomqondo wobunye.
Zikhuthaze ngezenzo ezinhle nempumelelo ebalulekile. Funda ukugxeka ngokwenza amaphutha akho. Zama ukuzithuthukisa nokukhula ngokomoya. Thola isikhathi sokufunda ubuso obusha buntu bakho. Futhi masinyane uzobona ukuthi impilo yakho iyashintsha ukuze kube ngcono, futhi izinkinga eziningi ziyishiya kuze kube phakade. Yiba nomusa kuwe nakwabanye. Hlonipha umzimba wakho futhi unakekele. Qaphela amapulani akho namaphupho akho. Funda ukuvumelana! Futhi, njengamagnethe, ngokuqinisekile uzodonsa empilweni yakho ulwazi lokuthi ungaba kanjani othandekayo!
Indlela yokuba owesifazane ojabule kakhulu, funda lapha .
Indlela yokufakazela kumyeni ukuthi akulungile
Indlela yokususa izinkumbulo zokuxhumana kwangaphambilini
I-Psychology: Umndeni ojabulayo
Indlela yokuhlala nezihlobo endaweni eyodwa
Ukucabanga okuhle kuguqula impilo
Indlela yokukhetha umshini wekhofi we-espresso wokusetshenziswa ekhaya
Indlela yokulahlekelwa isisindo, hhayi ukulahlekelwa ubuhle bayo nobuhle: thola izimfihlo ezingu-3 ze-Aishwarya Rai!
I-Chanel Cruise Collection e-Seoul
Izinto zokuthuthukiswa kwengqondo zezingane: ubuholi, imvelo, imfundo, ukukhuliswa, umsebenzi
Owesifazane angamnika kanjani injabulo yomuntu?
Ungaziqhenya kanjani uma konke kubi?
Siyakuhalalisela ngosuku lwe-akhawuntiant - enhle futhi ehlekisayo, nge-prose nakuvesi. Lungiselela ukuhalalisela okungcono kumuntu ophethe i-accountant evela eqenjini, osebenza nabo besilisa nabesifazane
Iziphi izimbali ezithinta induduzo yasekhaya